I-Biography Nokutholwa Kososayensi uJocelyn Bell Burnell | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Emhlabeni wesayensi, imiklomelo inikezwa labo sosayensi abenza iqhaza elikhulu ekuthuthukeni ezifundweni zemikhakha ehlukene. Kunabantu okuthi, yize benze umzamo omkhulu wokuthuthuka nokunikela kakhulu emphakathini wezesayensi, abangaklonyeliswa njengoba kufanele. Lokhu kunjalo ngabaseBrithani UJocelyn Bell Burnell. Baningi abacabanga ukuthi, ngaphakathi nangaphandle komphakathi wesayensi, bekufanele anikezwe umklomelo weNobel ngo-1974.
Kungani usosayensi uJocelyn Bell Burnell kufanele anikezwe? Thola kulokhu okuthunyelwe.
1 UJocelyn Bell Burnell
3 Ukutholwa kukaJocelyn Bell Burnell
4 Usosayensi ukushaye indiva ngokuphelele
Ungusosayensi ofunde futhi wenza inqubekela phambili enkulu ngokutholwa kwe-pulsars. LoSolwazi wamenyelwa eNyuvesi yase-Oxford futhi ukhethwe njengomnqobi wemiklomelo esigabeni seFundamental Physics. Lo mklomelo uphinde wanikela ngemali ethile ezungeze ama-dollar ayizigidi ezi-3. Kodwa-ke, le astrophysicist ibingenazo izinhloso zokugcina leso samba semali. Esikhundleni salokho, uzonikela ngale mali ukuxhasa abesifazane, abafundi ababaleki kanye nemiphakathi emincane yobuhlanga ukuze babe ngabacwaningi besayensi, ikakhulukazi emkhakheni we-physics.
Eminyakeni eyi-12 kuphela ubudala, wayesevele efuna ukufundela i-physics futhi azinikele kuwo. Lokhu bekungeke kwenzeke phakathi nawo-50s njengoba abesifazane bengazenzanga lezi zinto eNyakatho ye-Ireland. Kwabesifazane, ubungafunda imisebenzi efana nokupheka nokwenza imifekethiso. Lona wesifazane wayefunde yonke imitapo yolwazi yesayensi kayise futhi wakwazi ukwenza uthishanhloko wakhe ukuba amngenise esifundweni se-physics kanye namanye amantombazane amabili. Esiwombeni sokuqala sokuqala nje, wayesevele ephumelele kunabo bonke ekilasini lonke.
Ngaphandle kokuthi kungenzeka ukuthi ubenezinkinga ezanele zokuthuthuka ezifundweni zomzimba, wayengukuphela komuntu wesifazane eNyuvesi yaseGlasgow. Njalo uma engena esiteji edalula umsebenzi abafana abaningi babemphazamisa ngokushaya amakhwela nangokumemeza. Uma ngenxa yalezi zimpempe waphuphutheka, ama-boos aya kuye aqhubeka nokwanda. Ukuze ngibhekane nalezi zimo, ngafunda ukubanda njengeqhwa.
Eminyakeni eyalandela wangeniswa eCambridge. Kwakunomunye umfundi owayenaye futhi uJocelyn wayenokwesaba okuqhubekayo kokulahlekelwa ukubhaliswa kwakhe. Ngesikhathi efunda kule nyuvesi, wajoyina umnyango wezinkanyezi womsakazo. I-Thesis Professor yakhe ibifuna izinto ezikhanya kakhulu endaweni yonke ezibizwa ngama-quasars. Lezi zinto kwakufanele zifunwe kusetshenziswa amaza omsakazo. UJocelyn bell burnell wabamba iqhaza ekwakhiweni kwesibonakude okwakuzotholwa lezi zinto futhi ubephethe ukuhlaziya imininingwane etholakele.
Uqhubeke nokusebenza isikhathi eside kwaze kwathi ngemuva kwesikhashana kwatholakala isignali yesibili. Kamuva baba ezinye izimpawu. Ekugcineni kwatholakala ukuthi kwakungu-pulsars. I-pulsar iyinkanyezi ye-neutron futhi itholwe okokuqala nguJocelyn Bell Burnell.
Ukutholwa kukaJocelyn Bell Burnell
Lokhu kutholakala Yanyatheliswa ngo-1968 lapho uJocelyn eneminyaka engu-24 ubudala futhi wasayina indawo yesibili ku-athikili kumagazini i-Nature. Ezingxoxiswaneni abazenzile, bebembuza kuphela ngamasoka akade enawo noma ukuthi ungakanani ubhodisi abenawo. Kuphakathi kokuthi lokhu kwakungahlangene nakancane nakho konke akutholile kwesayensi.
Ukungabonakali okunikezwe le physics kwafinyelela esicongweni saso ngo-1974 lapho abavumbuli be-pulsars beklonyeliswa ngeNobel Prize kuFizikiki bekungekho muntu ohlwini. Amalungu amaningi alo mphakathi wezesayensi ayethukuthele aze aba namahloni ngokuthi lo sosayensi akazange anikezwe isikweletu ngokuba ngowesifazane nje.
Kodwa-ke, lona wesifazane akazange anqume ukuyeka, okuphambene nalokho. Igama lakhe lalikhohliwe iminyaka eminingi kuze kube Uklonyeliswe ngeSpecial Breaktrough Award. Kungumklomelo onekhono ongcono kunayo yonke emhlabeni wesayensi. Uthi wenze ukuthula nokukhohlwa okwenziwe kuye futhi wakhetha ukulwa yedwa. Ubelokhu eqoqa imali yokusiza abantu abasha abafisa isayensi. Kuyindlela yakhe yokuqaphela ukuphelelwa yisikhathi okwenzeka ngalowo Mklomelo kaNobel.
Usosayensi ukushaye indiva ngokuphelele
Abesifazane bebelokhu benezinkinga zokuthuthuka emhlabeni wesayensi, phakathi kokunye. Ngenhlanhla, kuya ngokuya kwaziwa ukuthi kunamaqembu ahlukahlukene phakathi kwabesilisa nabesifazane bobabili ebuholini nasemaqenjini ocwaningo. Lokhu kwenza amaqembu ocwaningo abe namandla, aguquguquke futhi aphumelele.
Phakathi kwamaqembu lapho abesifazane bengamelwe okungenani kuwo wonke umlando kuse-physics. Kungashiwo ukuthi sebeqalile ukufaka amanxusa ezinhlanga ezahlukahlukene futhi kuyamangalisa ukuthi abafundi abangabaleki bangazuza. Futhi yilokho Isikweletu ngokutholwa kwe-pulsars kaJocelyn Bell Burnell saya kososayensi u-Antony Hewish noMartin Ryle ngonyaka we-1974.
Njengomfundi ocwaningayo, lo sosayensi naye ubesiza ekwakheni isibonakude somsakazo, nokuyikho obekuvumela ukutholakala kwalolu hlobo olusha lwezinkanyezi abazibiza ngokuthi ama-pulsars. Ngaphezu kwalokho, nguyena owathola ekuhlaziyweni kokuqala kwale misebe engajwayelekile ngo-1967. Ukuze enze lokhu kutholakale, kwakudingeka aqinisekise othisha kanye nabaqondisi bakhe ababengabaza ukutholwa kwakhe ekuqaleni. Lokhu kungenxa yokuthi bekukholelwa ukuthi lezi zimpawu zikhiqizwa ngochungechunge lokuphazamiseka noma ngumuntu uqobo.
Kamuva kwatholakala ukuthi kwakuwuhlobo olusha lwezinkanyezi abazibiza ngokuthi ama-pulsars. Yize ukutholwa ikakhulu kwakubangelwa usosayensi uJocelyn Bell Burnell, wanganakwa ngokuphelele uma kuziwa ekunikezeni umklomelo weNobel eSweden. Abantu abaningi bacabanga ukuthi lokhu kungenye yezenzo ezimbi kakhulu ezenziwe emlandweni wabaphumelele umklomelo weNobel.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi nge-physics uJocelyn Bell Burnell.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » UJocelyn Bell Burnell
Ibanga ukusuka eMhlabeni nenyanga